फिलिपिन्समा शक्तिशाली आँधी बेहरी ज्यान गुमाउनेको संख्या १८० नाघ्यो ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»विश्व»फिलिपिन्समा शक्तिशाली आँधी बेहरी ज्यान गुमाउनेको संख्या १८० नाघ्यो !
फिलिपिन्समा शक्तिशाली आँधी बेहरी ज्यान गुमाउनेको संख्या १८० नाघ्यो !
By दिपेश बिष्ट on ९ पुष २०७४, आईतवार ०४:३३ विश्व
पुस ९, फिलिपिन्समा आएको शक्तिशाली आँधी बेहरीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एक सय ८० नाघेको छ । दक्षिणी फिलिपिन्समा आएको उष्णप्रदेशीय आँधीका कारण ठूलोमा मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ ।
अझै पनि धेरै मानिस हराइरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । आँधी बेहरीका कारण सबैभन्दा बढी फिलिपिन्सको दिक्षणी क्षेत्रमा रहेको मिन्दानाओ टापु प्रभावित भएको छ । टेम्बिन नामको उष्णप्रदेशीय आँधी बेहरीपछिको बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो मात्रामा मानवीय क्षति भएको बिबिसीले जनाएको छ । ८० मिलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा रहेको आँधी मिन्दानाओबाट दक्षिणमा पर्ने पलावानतर्फ अघि बढेको छ ।
बाढीले मिन्दानाओ टापुका केही गाउँ नै बगाएको छ । हराइरहेकाको खोजी भैरहेको फिलिपिन्सका अधिकारीले बताएका छन् । सरकारले आँधीका कारण प्रभावित लनाओ डेल नोर्ते, लनाओ डेल सुर तथा मिन्दानाओका केही क्षेत्रमा आपकालीन अवस्था घोषणा गरेको छ ।